I-Villa Baronessina - I-Airbnb
Kaltern, Trentino-Alto Adige, i-Italy
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Florian
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Dis 13.
I-Villa Baronessina iyi-villa yokunethezeka enkabeni yomlando yaseKaltern ene-whirlpool, i-sauna, ingadi enkulu kanye nedamu layo lokubhukuda elingaphandle.
I-Villa Baronessina yaklanywa umdwebi wezakhiwo uSolwazi Walter Angonese futhi yatolikwa ngobuciko yingcweti uManfred Alois Mayr. Iyigugu lesimanje, akuyona neze indawo evamile, enokuxhumana okuqinile nenkathi edlule yezokwakha.
Phansi kukhona ikamelo lokulala elilodwa eline-ensuite yokugezela, igumbi lokugezela leshawa elengeziwe kanye negumbi lokuhlala elingasetshenziswa njengegumbi lokulala eliphindwe kabili.
Ngaphandle, kodwa kuvikelwe i-canopy, kune-whirlpool yangasese. Eduze kwakho uthola ingadi evulekile yaseMedithera enama-sunbeds.
Okugqamayo kwengadi yichibi elingaphandle elinesistimu yokuhlanza amanzi anosawoti emvelo enobungani. Isikhumba sakho sizojabulela amanzi aso emvelo athambile.
Indawo ye-spa, indawo ekahle yokuphumula, ineFin- ne-Bio Sauna.
Isikhungo se-villa yigumbi lokudlela nelokuhlala esitezi sokuqala. Inikeza umbono omangalisayo ezintabeni ezizungezile kanye nengadi yaseMedithera enephunga elimnandi. Ngaphambi kwegumbi lokuphumula kukhona ithala elihle elinomthunzi we-wisteria. I-patio ethokomele, lapho ungahlala khona nokosa, imema ku-dolce vita.
Isitezi sokugcina, ucezu lombukiso lwebhilidi, luhlala ikamelo lokulala elikhulu elinobhavu ozimele ozimele.
Yebo, le ndlu inikeza zonke izinsiza zokuphila zesimanje: ifenisha yedizayini yezinga eliphezulu (iPlank, iRossin, iFlos, uRoberti Rattan) ehlanganiswe nezinto zasendaweni nobuciko bendabuko, ikhishi elihlome ngokuphelele, umshini wokuwasha, i-WLAN yamahhala, isikrini esiyisicaba. I-TV, indawo yokucima umlilo, isimo somoya, igrill yangaphandle, umbhede, amathawula okugeza nezingubo, njll.
2 izindawo zokupaka izimoto endaweni yokupaka izimoto engaphansi komhlaba.
I-Villa Baronessina ingahlalisa ku-200m² abantu abangu-4-6.
Sibheke ngabomvu ukukubona.
ubusuku obungu-7 e- Kaltern
Jan 12, 2023 - Jan 19, 2023
I-Villa Baronessina iwuhambo olufushane nje ukusuka enkabeni yedolobhana lomlando lewayini iKaltern.
Izitolo ezihlukahlukene, izindawo zokudlela, amabha, indawo ka-ayisikhilimu, indawo yokubhaka, ibhula, ikhemisi, isitolo sewayini kanye nesiteshi samabhasi somphakathi singafinyelelwa emizuzwini emi-2-3. Noma kunjalo, uhlala ngasese.
I-Kaltern/Caldaro iseNingizimu ne-Tyrol, indawo lapho kuhlangana khona isiko laseTyrolean nelase-Italy. Kuyizwe elinobuhle bemvelo. Kwake kwaba nonya futhi eyinyumba, kanye namaDolomite (Ifa Lomhlaba Le-UNESCO), lapho inganekwane yabaqwali bezintaba uReinhold Messner yazuza khona injabulo, kanye neqhwa laphakade, lapho kwatholakala khona umama weqhwa oneminyaka engu-5000 ubudala "Ötzi The Iceman". Khona-ke, ngakolunye uhlangothi eningizimu enhle, iMedithera, enezihlahla zesundu, imisayipuresi, izihlahla zamasitrobheli ngisho nezimbali zothando, “lapho kugcwala umoya opholile endaweni,” njengoba uGoethe esephawulile kakade ngo-1786.
Indawo enamagquma eningizimu ibuswa amadolobhana ewayini amahle, izinqaba ezinhle, izindawo zokuhlala eziningi ezinomlando. Ngaphandle kwezintaba ezinjengoSchlern, Rosengarten noMarmolata futhi ngaphandle kokuzwa abantu ikakhulukazi bekhuluma isiJalimane, ungase ucabange ukuthi useTuscany.
Intaba engemuva kwendlu kaKaltern yiMendel, engafinyelelwa yiMendel Cable Car. Yindawo ekahle yokuqala yokuhamba ngezinyawo eziningi. Amakhilomitha amabili kuphela eningizimu yeKaltern kuneLake Kaltern, ichibi lokubhukuda elifudumele kunazo zonke e-Alps.
Esigodini nasezindaweni ezizungezile ungavakashela inqwaba yama-wineries angcono kakhulu nabakhiqizi bewayini eSouth Tyrol.
Uma ufuna ukuzitholela ukudla okumnandi uzokonakala ongakhetha kukho: kusukela endaweni yokucima ukoma, indawo yokucima ukoma, ukuya endaweni yokudlela ejwayelekile yase-Italy kuze kufike endaweni yokudlela yase-Michelin star, zonke ziseduze.
Sekuyiminyaka, abenzi bewayini nabapheki baseSouth Tyrolean bephakathi kwabaklonyeliswe kakhulu e-Italy.
Okuvelele kunikezwa unyaka wonke: amakhonsathi nemikhosi yomculo, amasonto okupheka nemikhosi yasemakhaya, imibukiso yendabuko nemicimbi yezemidlalo efuna ngamandla.
Meine Familie und ich lieben es zu reisen. Dabei ist es uns vor allem wichtig Land und Leute kennenzulernen und unseren Urlaub, fernab vom Massentourismus in einer kleinen Unterkunft, die möglichst viel Privatsphäre bietet, zu verbringen. Abends dann überwiegt die Neugierde: wir lieben gutes Essen, wir testen gerne neue Restaurants und Bars.
Als wir vor fünf Jahren die Möglichkeit hatten, dieses wunderschöne Grundstück im Herzen von Kaltern zu erwerben, wussten wir von Anfang an, dass wir für Sie etwas Besonderes schaffen wollen, das unserer Vorstellung von Luxusurlaub entspricht.
Meine Familie und ich lieben es zu reisen. Dabei ist es uns vor allem wichtig Land und Leute kennenzulernen und unseren Urlaub, fernab vom Massentourismus in einer kleinen Unterkun…
Hlola ezinye izinketho ezise- Kaltern namaphethelo